-Iyo nhetembo dzaPablo Neruda ndidzo nziyo dzeyese. | Zvazvino Zvinyorwa
Hupenyu uye nhetembo dzaPablo Neruda: mudetembi wepasirese
John Ortiz | | Biography, Bvunzo, Vanyori, Nhetembo, dzakawanda
Hupenyu uye nhetembo dzaPablo Neruda.
Kuti titaure nezvaPablo Neruda tinofanirwa kudzokera mukuzvarwa kaviri kwanyanduri mumwe chete. Ndokunge, sekunge kwaive naRicardo Neftalí Reyes, kwaivewo nePablo Neruda, mazita maviri akasiyana ane nzira mbiri dzekutaura. Hazvingave zvakakwana kutaura izvozvo Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto akaberekwa muna Chikunguru 12, 1904 uye kuti Pablo akafa musi wa Gunyana 23, 1973, unofanirwa kuenda zvakadzama uye kuongorora husingaperi ruzivo rwemunyori wepasirese.
Ricardo Neftalí akafunga kuenda kuguta guru akatakura hujaya hwake mupeni yake, uye akatakura museuzi wakada rudo, mufaro uye kufungidzira. Baba nyanduri havana kufarira tarenda rake renhetembo, izvo zvakaunza mutsauko pakati pavo. Nekuda kwekukanganisa nababa vake, Ricardo akafunga kutora zita rekuti Pablo Neruda, zita rekunyepedzera rakamuperekedza kusvika kumagumo uye iro panguva iyoyo rakamusunungura kubva kumatare emhuri. Tarenda remunyori rakange rine mukurumbira, kusvika padanho rekuti, aine makore gumi nematanhatu chete, muna 16, akahwina mumakwikwi ake ekutanga enhetembo.
1 Mabasa ake ekutanga
2 Nyanduri avant-garde
3 Shanduko yenzvimbo, shanduko yekuona kwehupenyu
4 Neruda matanho mana ekugadzira
5 Neruda nemadzimai ake matatu
6 Nhetembo naPablo Neruda
6.3 Nharaunda isina mwenje
7 Neruda, chinyoreso chakanyora zvese
8 Tsamba yaPablo Neruda
9 Isla Negra, chiteshi chayo chekupedzisira
10 Neruda uye kukwirira kwezvinhu nezvinhu
Mabasa ake ekutanga
Maitiro aPablo Neruda Kwaive kuputika, jaya rakatanga kunyora zvakashata, uye kuwedzeredza kwakamuratidzira panguva iyoyo yaive nyeredzi yehupenyu. Semuyenzaniso, Twilight (1923) akazvarwa pakati pekuwanikwa kwezvaainzwa uye nemanzwiro.
Tevere, mudetembi wechidiki yakashamisa nharaunda yekunyora neimwe yemabasa anotengesa zvakanyanya mumutauro wechiSpanish: 20 nhetembo dzerudo uye rwiyo rwekupererwa (1924). Iri basa rakapinda zvakadzama munyika yetsamba uye rakavhura mikova yekubudirira kune munyori mudiki.
Zvimiro zveNerudian zvishoma nezvishoma zvakatanga kuratidza hunyanzvi kumeso. Neruda's avant-garde yakaratidzirwa mukubata kwezvivakwa zvemadetembo, mukusagadzikana kwehunhu hwake, murusununguko rwekufunga uye kunetsekana kwakadzama kwezvinhu zvevanhu. Mudetembi mumwe chete, muhupenyu hwake, akavimbisa kuti: "Zvaisaita kuvhara musuwo wemugwagwa mukati medetembo dzangu." Panguva ino, Ricardo Reyes akatanga kunzwisisa kuti Neruda anga ave chimwe chinhu chinopfuura zita: mukurumbira.
Shanduko yenzvimbo, shanduko yekuona kwehupenyu
Zvakanaka, Paaipfuura kubva parunyararo rweParral, guta rekumusha kwake, achienda kuneeigh iko kupi kwaakapihwa nekusvika kwebasa rake rezvematongerwo enyika pasirese., muunganidzi wezvinhu, mudetembi ane meso ekuzvikudza, Latin America uyo akanyora General imba uye akagashira mubayiro weNobel wemabhuku muna 1971. Nemamwe mazwi, kubva kuna Ricardo akakanganwa akasvetukira kuna Pablo akazvitsaurira.
Neruda matanho mana ekugadzira
Hupenyu hwaPablo Neruda hwaizivikanwa nekuve nematanho mana ekugadzira, rimwe nerimwe rakagadziriswa nemamiriro ezvinhu akamukomberedza.. Pakutanga, hudiki hwake muParral uye makore ake ekutanga muSantiago, iyo yaitsanangura mudetembi werudo akafuridzirwa nehunyanzvi hwaRubén Darío. Muchikamu chechipiri, danho rebasa rake: Kugara pasi pano (1937), iyo inoratidza kugara kwake muBurma, Colombo neHolland uko kwaakaita chibvumirano chekutanga chemichato yake mitatu. Yetatu, danho rake rezvematongerwo enyika iro, kubva muna 1937, rakagara kusvika parufu rwake. Muchikamu chino chekupedzisira bhuku remabhuku rakasiyaniswa nebasa reNerudian: General imba (1950).
Mupfungwa imwe chete iyi, paaitaura nezvenguva yechina yebasa raNeruda, kutarisisa kwaakapa zvinhu "zvisina basa" kunofanira kuverengerwa. Misoro inodzokororwa mubasa raNeruda yaitenderera pazvinhu zvezuva nezuva, kumhuri, kuzviitiko zvemugwagwa, kune zvese. Nhetembo yake mupfungwa iyi inoitika muna Elemental Odes. Semuenzaniso, mu "Ode kuna Artichoke", kwete chero munhu wese anoshandura chirimwa kuita murwi anorota mauto uye anopedzisira ave murunyararo rwehari. Hunyanzvi hwaNeruda, pasina mubvunzo, akatamba achienda kune yake mamiriro ezvinhu. Ivo vanogona zvakare kutumidzwa mazita: Ode kumhepo, Ode kune hanyanisi, Ode kune chivakwa, Ode kugodora, Ode kusuwa, Ode kune manhamba, Ode kune wachi husiku, pakati pevamwe.
Neruda nemadzimai ake matatu
Neruda aive nemadzimai matatu: María Antonieta Hagenaar, waakasangana naye muJava, Delia del Carril, uyo kunyangwe aine makore makumi mashanu akakwanisa kutora Pablo ane makore makumi matatu, naMatilde Urrutia, mukoti uye mugadziri wemba uyo akamuchengeta phlebitis apo aive kuMexico. Kune wechipiri akakumikidza muunganidzwa wake wenhetembo Ndima dzemutungamiriri, bhuku rakakamurwa kuita zvikamu zvinomwe uye panorondedzerwa chimwe nechimwe kuteedzerana, sekureva kwanyanduri, kwehukama hwerudo: "Rudo", "Chido", "Furies", "Hupenyu", "Ode uye kumera", " Epitalamio "uye" Tsamba iri munzira ".
Nhetembo naPablo Neruda
Pazasi pane nhetembo nhatu dzaPablo Neruda, hunyanzvi hwevhesi iyi:
Nhasi ndakatambanudza padyo nemukadzi wechidiki akachena
sekumahombekombe egungwa jena,
sepakati penyeredzi iri kutsva
Nezve ake akareba girini kutarisisa
chiedza chakawira semvura yakaoma,
mumatanho akadzika akajeka
Chipfuva chake semoto wemirazvo miviri
yakapisa mumatunhu maviri akamutswa,
uye murwizi ruviri rwakasvika patsoka dzake,
Hukuru uye hwakajeka.
Mamiriro ekunze egoridhe akange ari kuibva
kureba kwekushanduka kwemuviri wake
uchizadza nemichero yakapararira
uye moto wakavanzwa.
Mukadzi, ndingadai ndakave mwanakomana wako, nekukunwa iwe
mukaka wemazamu sechitubu,
yekukutarisa uye kunzwa iwe padivi pangu uye kuva newe
mukuseka kwegoridhe nezwi rekristaro.
Zvekunzwa iwe mutsinga dzangu saMwari munzizi
uye vanonamata iwe mumapfupa akasuruvara eguruva uye lime,
nekuti hupenyu hwako huchapfuura husina kurwadziwa parutivi rwangu
ndokubuda mudanho-rakachena rezvakaipa zvese-.
Ko ndaigoziva sei kukuda iwe mukadzi, ndaigozivei zvangu
kukuda, kukuda zvisina ani akamboziva!
Kufa uye zvakadaro
Quote naPablo Neruda.
Nharaunda isina mwenje
Nhetembo yezvinhu inoenda here
kana hupenyu hwangu haugoni kuhukoshesa?
Nezuro -kutarisa kwayedza yekupedzisira-
Ini ndaive chigamba chemoss pakati pemamwe matongo.
Maguta -soles uye kutsiva-,
iyo grey yakasviba yemasabhabha,
hofisi iyo yakakotama musana wayo,
shefu vane maziso.
Ropa dzvuku pazvikomo,
ropa mumigwagwa nezvikwere,
kurwadziwa kwemoyo wakaputsika,
Ndichaora neshungu uye nemisodzi.
Rwizi runombundira mudunhu
sechanza chine chando chinoedza murima.
vanonyara pamusoro pemvura yaro
Uye dzimba dzinovanza zvishuwo
kuseri kwemahwindo akajeka,
apo kunze kwemhepo
kuunza dope diki kune rimwe rose.
Kure ... mhute yekukanganwa
-Utsi hwakakora, mvura yakaputsika-,
nemunda iwo munda wakasvibira wavanofemereka
mombe nevarume vakadikitira.
Zvino ndiri pano, ndakamera pakati pematongo,
kuruma chete kusuwa kwese,
sekunge kuchema yaive mhodzi
uye ndini ndoga mugero panyika.
Neruda, chinyoreso chakanyora zvese
Pablo Neruda aive mudetembi wepasirese nekuti akanyorera kune zvese zviripo, kumibvunzo, kumhinduro, kune chokwadi, kunyepa, kusanzwisisana, kururamisira, kukosha. Nenzira imwecheteyo, haana kusiya mundima yake zviitiko zvenguva yake yakapfuura, kushungurudzika kwemazuva ano uye fungidziro yeramangwana rake.
Uyewo Akaimba zvikonzero, zvematongerwo enyika, murume, hudiki, kuyaruka, mufaro uye hutsinye. Nekudaro, chakanyanya kushamisa chinhu kusiya zvifananidzo zvake zvisinga tsanangurike zvatiri kuramba tichitsvaga nanhasi. Ndiyo yekupedzisira inoita kuti ave mudetembi asinga kwaniswe katarogu.
Tsamba yaPablo Neruda
Kunyanya kutaurwa kunofanira kuitwa kwetsamba dzake, Mariri mune tsamba dzakatumirwa kune rudo rwekukura kwake, Albertina Azocar, tsamba kumhuri yake, kushamwari yake Héctor Eandi uye tsamba dzerudo kuna Matilde Urrutia. Nezve iye munhu aive wekupedzisira rudo rukuru muhupenyu hwake, akamunyorera tsamba yaDecember 21, 1950 ndokuti zvinotevera: “Kana iwe ukauya, iwe unogona kuvimba neni kuti ndibvise kutsamwa kwangu. Ndinokuda chaizvo. Iye zvino usandinyorere zvakanyanya pachivande. Ndipindurewo zvangu nezve hupenyu hwako nemaprojekti ”. Zviripachena zvakacherechedzwa kuti akange asisade kuramba achivanza hukama uhwu naUrutia.
Isla Negra, chiteshi chayo chekupedzisira
Pamusoro pemabasa akatodomwa, zvinotevera zvinogona kutaurwa: Twilight, Farewell uye sobs, Iyo inoshingaira inoridza, Iyo Mazambiringa neMhepo, Estravagario, Navigations uye Returns, Mazana Mazana Masoneti eRudouye Isla Negra Chirangaridzo. Nezve Isla Negra, uko kwaakavigwa zvitunha zvake, ndipo paakanyora kuti: "Uyu ndiye ini, ndichati, kusiya ichi chinyorwa chekunyepera: ndihwo hupenyu hwangu.". Zviripachena kuti muunganidzwa wenhetembo wakatanga nhanho yekupedzisira uye zviri kune vaverengi vanoshingaira vezana ramakumi maviri nemasere kuti varambe vachiongorora hombe nharaunda yeNerudian.
Pablo Neruda mune kero.
Neruda uye kukwirira kwezvinhu nezvinhu
Nenhetembo dzaPablo Neruda zvese zvakatora zvirevo zvitsva, ndima dzechando dzakasimuka, mavara ebhuruu akafashukira uye hozhwa dzePacific Ocean dzakabatwa.. NaNuda, varume vakareruka vanoramba vachikwira, maziso ane husimbe, dzimba dzakaparadzwa, mazai akaviriswa. Nekudaro, hazvigoneke kutora katari nyanduri akanyorera chinenge zvese uye achiri kuramba achinyora asina kunyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Hupenyu uye nhetembo dzaPablo Neruda: mudetembi wepasirese
1. El Cid anodzokera kukamba. Yake Cantar nedzimwe nhetembo
Ramón Gómez de la Serna. 40 greguerías yechiitiko chavo